what, when, why: डाक्टर भन्दा जान्ने
डाक्टर भन्दा जान्ने
﻿बिरामी श्रीमानलाई श्रीमति र छोरा मिलेर अस्पताल लैजान्छन् । अस्पताल लगेको एकछिन पछि डाँक्टरले भन्छ : वहाँ त मरिसक्नु भएको छ । त्यो सुनेर बिरामी जुरुक्क उठेर भन्छ : म त ज्युँउदै छु । जहिले पनि श्रीमानको कुरा काट्ने बानी परेको श्रीमति भन्छिन् : नकराउनुस् ! तपाईं डाक्टर भन्दा जान्ने मान्छे हो र ??